आँधी प्रभावितको दुःखेसो : सेनाले बनाउने घरमा अटिदैन, कहाँ बस्ने ? - Narayanionline.com Narayanionline.com आँधी प्रभावितको दुःखेसो : सेनाले बनाउने घरमा अटिदैन, कहाँ बस्ने ? - Narayanionline.com
आँधी प्रभावितको दुःखेसो : सेनाले बनाउने घरमा अटिदैन, कहाँ बस्ने ?
२५ बैशाख २०७६, बुधबार
२५ बैशाख, वीरगञ्ज
वैशाख २१ गते उपप्रधानमन्त्रीहरु ईश्वर पोखरेल र उपेन्द्र यादव तथा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मन्त्रीहरुले आँधी प्रभावित बारा र पर्साका बासिन्दाको घर निर्माणको शिलान्यास गरे । सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा दुई वटा कोठा, भान्साकोठा र शौचालयसहितको घर बनाउनेछ ।
तर फेटा गाउँपालिका ६ पुरैनियाका अइनुल हक मियाँ अन्सारी र फिरोज अन्सारी दाजुभाइले घर निर्माण गर्न थालेको १० दिन भइसकेको छ । उनीहरुले घर बनाउन सरकारलाई कुरेर बस्नु उचित ठानेनन् । ६ कोठाको घरको जग खनेर पिलर उठाउने काममा उनीहरु खटिएका छन् ।
आँधीले फिरोजको ६ वर्षको छोरा फैयाज अन्सारीको ज्यान लिनुको साथै हजुरबुवालाई घाइते बनायो ।
अइनुल हक मियाँ अन्सारीको छोरा मुमताजले सेनाले बनाउने घरले आफूहरुलाई नपुग्ने बताए । ‘सरकार जुन घर बनाउँछ । बलियो पनि छैन, त्यो टिनको छाना छ, हावाहुरी आयो भने उडाएर लैजान्छ । हाम्रो परिवार ठूलो छ, त्यसले पुग्दैन’ उनले भने ।
मुमताज दाङ तुलसीपुरमा कक्षा १० मा अध्ययनरत छन् । आँधीले घरमा विपत्ति ल्याएपछि घर आएका उनी घर निर्माणमा अभिभावकलाई सघाउँदैछन् ।
आमा जयमुल नेसा घाममा टेन्टमा बस्न कठिन रहेको बताउँछिन् । ‘ठूलै घर थियो, मालसमान राख्ने ठाउँ थियो, हावाहुरीले सबै खत्तम गरिदियो । सुन्दैछु, सरकारले सानो घर बनाउँदैछ, त्यसमा हाम्रो गुजारा हुँदैन, कति सोच्ने ? बालबालिकालाई बस्ने ठाउँ छैन, दिनभरी घाममा मरुला जस्तै हुन्छ, बच्चा लिएर कहाँ जाने ?’ उनले भनिन् ।
घर निर्माणका लागि उनीहरुले जग्गा धितो राखेर ६ लाख ऋण लिएका छन् भने आफन्त र साथीहरुसँग सापटी लिएका छन् । फिरोज अन्सारीलाई छोरा वितेको चिन्तासँगै बाँकीलाई कसरी जोगाउने चिन्ता छ । आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेपछि उनको सातो जान्छ । ‘ ‘छोरा वित्यो, घर पनि ढल्यो, १२ जनाको परिवार छ । सेनाले बनाउने घरले हामीलाई पुग्दैन’ फिरोजले भने ।
सफिक अन्सारीलाई सेनाले कस्तो घर बनाउँदैछ भन्ने पनि थाहा छैन । अन्सारी परिवारकै सदस्य कमरुल नेशा सेना सेनाले बनाउने घरमा परिवार नअट्ने बताउँछिन् । ‘दुईवटा टेन्ट मिलेको थियो, एउटा आँधीले उडाएर लग्यो । सेनाले सानो घर बनाउँदैछ भन्ने सुनेको छु’ उनले भनिन् ‘५ भाइको २५ जनाको परिवार छ । ५ भाइलाई कम्तीमा एक एक कोठा त चाहिन्छ नि । कसरी पुग्छ सानो घरमा ?’
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक विरेन्द्र साह सरकारले हतारमा निर्णय गरेर गल्ती गरेको बताउँछन् । ‘एकीकृत बस्तीको मोडेलमा जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । सरकारले हतारमा निर्णय गरेको छ’ उनले भने ‘एक त घरको डिजाइन पनि तराई मधेसको हावापानी सुहाउँदो छैन । यहाँ अझैपनि संयुक्त परिवार बस्ने चलन छ । एकै जनाको पनि धेरै सन्तान हुन्छन्, त्यति सानो घरमा एउटा परिवार पनि अट्दैनन् ।’
नेपाली सेनाले पूर्वाधार निर्माणको मात्रै जिम्मेवारी पाएको छ । सेनालाई सहज रुपमा काम सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग गर्नेगरी प्रदेश २ का मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय घर पुनर्स्थापना तथा घर पुनर्निर्माण सहजीकरण र समन्वय समिति गठन भएको छ । बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
नेपाली सेनाले १२ वटा क्लष्टर बनाएर काम गरिरहेको छ । नेपाली सेनाका अनुसार त्यसलाई सहयोग गर्न स-साना कार्यदल पनि छन् । नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानराज पाण्डे वर्षअघि नै भौतिक निर्माण्को काम सक्ने योजना रहेको बताउँछन् । उनले भने ‘काम गर्दा जति पनि समस्या आउँछ, प्रदेश सचिव ज्युको अध्यक्षतामा गठित समितिले समाधान गर्छ ।’
बहुविवाहको आरोपमा श्रीमान् श्रीमती कारागार चलान
१७५ किलो गाँजासहित ट्रक प्रहरी नियन्त्रणमा
निजी विद्यालयको मनपरीः बसमा भेडाबाख्रा कोचे झै बिद्यार्थी कोचेर विद्यालय पुर्‍याउछन्